Ihe ngosi B2B Lead Generation | Martech Zone
Zụ ahịa azụmaahịa (B2B) na-eduga n'ọgbọ site na okike ọdịnaya bụ atụmatụ dị egwu. Mepe, kesaa ma na-akwalite ọdịnaya dị n'ịntanetị nwere ike ime ka ikike gị too ma wulite mmekọrịta gị na ndị ahịa gị. Unbounce - ebe a na - eme onwe gị ọdịda ihu igwe - ewepụtala ihe omuma a, Ihe ngosi B2B Lead Generation ịkọwapụta usoro ihe ịga nke ọma nke B2B na-eduga n'ọgbọ site na ịre ahịa ọdịnaya.
Ihe omuma ahu na enye onu ogugu di nkpa nke kwadoro ihe okike site na ịde blọgụ na ide ederede, na-eduga njikarịcha ihu akwụkwọ, na-eji ohere ndị furu efu eme ihe mgbe emechara mkpọsa ahịa gị, na-anabata azụmaahịa mkpanaka ma na-eduzi nurturing.
Tags: b2b infographicb2b ndu ọgbọịde blọgụ atụmatụazụmahịa na azụmahịaebookebook atụmatụederedengwọta peeji nkeedu ọgbọndu ndu ọphundu nurturingadịghị ama